China Isipho Bath & Shower Spa Basket Isipho Setha Lemon Iphunga Bath Setha Umkhiqizi kanye Umhlinzeki | Haida
IZIPHO ZESIQALELO “Indlela yokunikela ibaluleke ukudlula isipho” Yingakho sakha izinto ezinhle kakhulu nezingafani nezingqayizivele zokufaka izipho okwenza obhasikidi bezipho zethu babe nemibono yezipho engu-No. 1 yomfazi, umama nentombi.
1.SCENT: Ulamula Olusha
Iphunga LeLemon Elisha - Njengokuqabuleka kwantambama, iphunga lethu likalamula lilula futhi limnandi. Iphunga elisha likalamula lihlala isikhathi eside futhi uzoqiniseka ukuthi uzokunikeza ukuphumula okudingeka kakhulu obukade ukulangazelela!
2.COMPLETE SPA GIFT SET Iqukethe
-200ml ijeli yokugeza
-50ml umzimba wokugcoba
-6x15g amabhomu okugeza
-100g usawoti wokugeza
-Loofah emuva kwesikhuhli
Ibhakede leMetal lokuhlobisa noma lokugcina.
I-body lotion -
Ithi Good bye ukoma isikhumba esomile. Le lotion yomzimba izondla futhi iswakalise isikhumba sakho ngenkathi ikushiya ngephunga elimnandi, nelibucayi.
Gel yeshawa -
Faka inani elincane lejel ezandleni noma isipanji esithambile, esimanzi - ngesikhumba esicebile, esinokhilimu. Wena ukugembula uzowuzwa umehluko.
Akukho lutho olufana nokugeza okushisayo kwe-bubble ukudambisa imisipha ekhathele futhi uphumule umzimba. Le bhafu yokuthambisa enamakha ethambile idala amagwebu amaningi anamagwebu futhi ithambisa futhi ithambise isikhumba ngenkathi ucwilisa.
Thela inani eliphakeme lomkhiqizo emanzini afudumele afudumele. Govuza amanzi ukusiza ukuqedwa kwamakristalu.
vele uphonsa ibhomu lakho ebhavini bese ulinda ukuthi i-fizzy ibe matasa.
ILoofah Back Scrubber-Lesi scrubber sangemuva sinamacala amabili, elinye lithambile kanti elinye liyi-loofah surface enhle yokukhipha. Isikhuhli sinezibambo, kwenze kube lula kakhulu ukufinyelela emuva kwakho.
I-Paraben imahhala futhi ayihlolwa ezilwaneni.
Izexwayiso noma imikhawulo
GWEMA UKUXHUMANA NAMEHLO. UMA UMKHIQIZO UTHOLA AMEHLO NGOKUVUSA NGOKUSHESHA NAMANZI AHLANZEKILE OKUFUDUMELE. UMA UKUTHI UKUBHALALA KWESIKHUMBU KUQHUBEKA NGEKE USETSHENZISE. UMA UMBHALO WOKUBHALISA UTHOLA UDokotela WAKHO.
I-FOB Port: XIAMEN
Isikhathi sokuhola: izinsuku ezingama-25-45
Ibhokisi le-Meas: 49 * 45 * 26CM
Imisa ibhokisi ngalinye: 6sets
Indlela yokukhokha: T / T, L / C.
Ukulethwa usuku: 25-45days emva oda uqinisekise.
1.Isitifiketi: I-FDA, i-BSCI, i-GMPC, i-ISO.22716, ukuhlolwa kwamanani okuhlola nokuthengisa kwabathengisi.
Intengo engu-2 yokuncintisana nekhwalithi enhle kakhulu nokuklama okusha futhi nokumisa okuhlukile.
Ukwakheka kwe-3.Specific & Iphunga elimnandi le-flavour.
Isevisi ye-4.OEM ne-ODM, sithanda amakhasimende ukuthi athuthukise izinto ezintsha zomkhuba.
Umnyango wokulawulwa kwekhwalithi we-5.Ubhekene ngokukhethekile nokuhlolwa kwekhwalithi kusuka kukho konke okuluhlaza kuya kuzimpahla eziqediwe kunqubo ngayinye.
Izithako ezondlayo umswakama wesikhathi eside ukuthambisa ngisho isikhumba esome kakhulu somuzwa othambile, othambile futhi olula kakhulu. Yonke ifomula ingokwemvelo ngokuphelele, imikhiqizo enempilo futhi ephephile njalo iyinjongo yethu.
siyaqiniseka ezinhlotsheni zethu ezahlukahlukene futhi ezingaguquguquki! Thenga amasethi ahlanganiswe kahle ukuze ube nesipho kubangani bakho, obathandayo noma nje ukuze uzenzele isipiliyoni sakho se-spa ekhaya!
Langaphambilini Ibhasikidi Lesipho Sasekhaya - Okubizayo okungu-7 Piece Bath & Body Set For Women
Olandelayo: Ibhasikidi Lesipho Lokugeza Nomzimba Labesifazane Nabesilisa
Ukugeza Nemisebenzi Yomzimba Isethwe ngeFloral Fragrance F ...
I-Shea Body Butter - I-Lavender Shea Butter B ...
I-Spa Home Relaxation Iphunga Lesikhwama Le-Woman Ros ...
Ukuphumula kwesipho sokugeza esenzelwe usuku lokuzalwa lomama ...